Tokana ao Shina
Izaho avy any Shina
Nanomboka aho mba hianatra ny lokanga aho tamin’izaho dimy taona. Dia nahazo diplaoma avy amin’ny sekolin’ny haikanto momba ny Mozika sy ny majored amin’ny Lokanga sy ny pianô. Efa vavy iray izay tsy miaraka amiko. Izy ihany koa no nanatrika ny sekolin’ny haikanto momba ny Mozika, ary ankehitriny dia mitendry lokanga lehibe. Vaovao farany: — Ôkt, manomboka ny taona any Anhui, SHINA, fa tsy misy intsony ny mitady. Eto, ny lafiny ara-tsosialy ihany. Ny fiainana raha mangalatra, aza t malahelo. Aza t sento, maloka ny andro dia lasa.
Ny sambatra ny andro ho avy
Fo foana miandrandra ny ho avy. Fa matetika maizina ankehitriny. Ny zava-drehetra dia haingana, ny zavatra rehetra dia ho lasa teo. Ary taloha, dia lasa karazana fahatsiarovana. Eto aho mitady soulmate mba hiaraka samy hafa sy mandany fotoana miaraka. Izaho dia olona ihany no afaka hanao zavatra iray amin’ny fotoana iray. Ao ny lasa, efa mifantoka amin’ny ny fandinihana sy ny fikarohana. Ao akaikin’ny ho avy aho handeha ho efa misotro ronono. Izaho dia vehivavy tsotra, tiako tsotra mamingavinga, aho tia sy ho tia mikarakara, ho aho natokana ho ny mpiara-miasa raha izaho no eo amin’ny fifandraisana, aho hatsaram-panahy, ny fahalalana sy ny fitiavana, aho tantaram-pitiavana ny olona loatra. Izaho no mora ny mahazo miaraka. Tiako ny fandrahoan-tsakafo, tiako ny mihaino mozika, r. Mahitsy sy tsotra, fa dity sy ny voro-amboadia. Araka ny anaram-boninahitra, tsy mitady afa-tsy ny iray ihany no mifanohitra amin’izany, survivalist, ny buddy ho ahy tsara fa tsy nisintona ahy teo. Izaho dia lehilahy matotra kokoa fomba fisainany, ny toetrany dia tia, tiako ny fiainanao, izaho no mendri-pitokisana ny olona, manantena aho fa afaka mahita ny sexy Tandrefana vehivavy. Ny toetra amam-panahy dia be fanantenana, ny olona manodidina ahy hoe izaho no malemy fanahy sy tsara fanahy ary tsy afaka ny hanome ny olona tsara hery nandritra ny fotoana ratsy. Afaka mandany fotoana miaraka amin’ny fijerena sarimihetsika, mihinana ranomandry menaka, nandeha tany amin’ny tora-pasika, tantaram-pitiavana ny hariva, na dia afaka manao zavatra adaladala sy hiala voly.
Eny, afaka manao izany miara
Inona no hataoko mba anao dia ny fizarana fiainana miaraka amin’ny tsara sy ny ratsy, ny any. Malemy fanahy sy fiheverana, fotsiny aho ho toy ny olon-tsotra mitady lehilahy iray izay tsy ny olon-tsotra ahy, angamba ny hafa ny antsasaky ny fiainako, na ny fanahiny vady, na ny olona izay tena mahafantatra ahy. Ny olona izay tena afaka mandeha ho any amin’ny fiainako. Mampifandray ny tokan-tena dia tena maimaim-POANA. Maro ireo tolotra aterineto fiarahana milaza ho maimaim-poana, ary avy eo dia gaga anareo amin’ny fiampangana ho an’ny endri-javatra toy ny nifandray tamin’ny mpikambana hafa, be dia be ny fikarohana, ny fijerena ny mombamomba azy na ny sary, sns. Mampifandray ny tokan-tena dia tanteraka maimaim-poana-ny-ampiasaina online dating service (maimaim-poana ny zava-drehetra) dia noho ny fankatoavana ny mpikambana ao Shina. Endri-javatra rehetra eo amin’ny Fampifandraisana ny tokan-tena dia tsy misy fiampangana, saram, nahazoan-dalana, coupons na tsy ampoizina. Hiaraka Ankehitriny maimaim-POANA
← Ny Antony Vehivavy Shinoa Hanambady Vahiny Ny Olona